Abakhiqizi bejekhi ye-hydraulic floor | EPONT Jack
Kusukela ngo-2006, u-EPONT Jack ungumkhiqizi wemishini yokulungisa izimoto (amajekhi we-hydraulic, crane wenjini).
I-Hydraulic Bottle Jack
Ezinye Izisetshenziswa Zokuphakamisa
Abakhiqizi be-jack floor professional
i-2.5T i-low floor jack
ujeke waphansi 3T
Abakhiqizi bejekhi ye-hydraulic floor abaqeqeshiwe
Lo mkhiqizo umelane nokuhlolwa kwethimba lethu le-QC elichwepheshile kanye nezinkampani zangaphandle ezigunyaziwe.
isikhethekile ekukhiqizweni iminyaka eminingi.
Umkhiqizo u-hypoallergenic ngakho-ke uthambisa isikhumba, unciphisa kakhulu ingozi yokusabela okubi.
I-EPONT Professional steel structure abakhiqizi bamakhaya, Sinemigqa yokukhiqiza emi-4 kanye nemigqa yokukhiqiza yokwelapha ukushisa emi-2, ujeke webhodlela ngelinye ilanga singakhiqiza cishe ama-5000pcs, mayelana nojeke waphansi singakhiqiza ama-500pcs.
I-Zhejiang Yipeng Machinery Co., Ltd. yasungulwa ngo-2006. Etholakala enkabeni yedolobha lebhande lezomnotho emfuleni iYangtze, iJiaxing, lapho iseduze neShanghai, Hangzhou, Ningbo, idolobha laseSuzhou, njll, elilungele kakhulu izinto zokuhamba. Le nkampani iyiqoqo le-Engine Crane ehlukahlukene, i-Floor Jack 3T, i-Floor Transmission Jack eyinhlangano eyisipesheli yebhizinisi yokucwaninga, ukuthuthukiswa, ukukhiqiza nokudayisa. Le nkampani ihlanganisa indawo 17000 square metres, inkampani ukuthatha "Idumela esekelwe, izinga kuqala" ifilosofi yebhizinisi, ukunikeza amakhasimende imikhiqizo izinga, kancane kancane, yokusungula idumela elihle embonini, isikali ibhizinisi liyakhula. YIPENG kholwa ngokujoyina kwakho, kuzoba nekusasa elingcono, kholwa yi-YIPENG, khetha i-YIPENG, joyina i-YIPENG, sizokunikeza isevisi engcono kakhulu nesiqiniseko. I-Epont mechanical iqoqo le-Engine Crane ehlukahlukene, i-Floor Jack 3T, i-Floor Transmission Jack okuyibhizinisi eliyisipesheli lesikhungo sokucwaninga, Ukuthuthukiswa, Ukukhiqiza kanye nokudayiswa.1. SINEZIQUKO: Sinesitifiketi seziqu esisemthethweni2. UBUCHWEPHESHE BOKWENZIWA: Ucwaningo oluqhubekayo kanye nokusungula izinto ezintsha3. UKWAneliseka Kwekhasimende: Nikeza ngomkhiqizo owanelisayo.